Football Khabar » च्याम्पियन्स लिगमा सिमोनीको यस्तो दुर्लभ तथ्य, जुन धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ !
च्याम्पियन्स लिगमा सिमोनीको यस्तो दुर्लभ तथ्य, जुन धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ !
युरोपियन च्याम्पियन्स लिगअन्तर्गत अन्तिम १६ को पहिलो लेगको खेलमा स्पेनिस क्लब एथ्लेटिको मड्रिडले साबिक विजेता इंग्लिस क्लब लिभरपुललाई गत राति १–० ले हरायो । आफ्नो घरमा भएको खेलमा एथ्लेटिको खेलको चौथो मिनेटमै गोल गरेर सोही अन्तिम समयसम्म जोगाएर खेल जित्यो । र, यही अवस्थामा उसले लिभरपुललाई हराएर अन्तिम आठमा जाने बाटो खुला गरेको छ ।
जब अर्को महिना एथ्लेटिको दोस्रो लेग खेल्न लिभरपुलको घरेलु मैदान एनफिल्ड पुग्छ, त्यहाँ इंग्लिस टोलीले हालको नतिजा उल्टाएर समग्रमा गोलअन्तरमा जित निकाल्न नसके लिभरपुल यसपटक अन्तिम १६ बाटै आउट हुँदा एथ्लेटिको अर्को चरण जानेछ । तर, लिभरपुल उत्कृष्ट टिम भएकाले आफ्नो घरमा एथ्लेटिकोविरुद्ध पुनरागमन गर्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ ।
किनभने, गत सिजन लिभरपुल सेमिफाइनलमा स्पेनकै क्लब बार्सिलोनासँग उसको घरमा ३–० ले हारे पनि आफ्नो घरमा भएको दोस्रो लेगमा ४–० को सनसनीपूर्ण जित निकाल्दै फाइनल पुगेर पछि उपाधिसिमेत जितेको थियो । र, यसपटक लिभरपुल त्यही अवस्थामा छ ।
सिमोनी जो रोनाल्डोबाहेकको टिमसँग नकआउटमा कहिल्यै हारेका छैनन् !
गत राति एथ्लेटिकोले लिभरपुलविरुद्ध साँघुरो जित निकालेपछि धेरैले प्रश्न गरिरहेका छन्– के एथ्लेटिकोले यही अग्रता जोगाएर क्वार्टरफाइनल पुग्छ ? वा, लिभरपुललाई अन्तिम १६ बाटै आउट गराउन सक्ला ?
यहाँ विगतको एक तथ्यबारे कुरा गरौं, जुन धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । हाल एथ्लेटिकोको प्रशिक्षक रहेका अर्जेन्टिनी डिएगो सिमोनी ८ वर्षदेखि एकै क्लबमा छन् । तर, यसबीच उनले टिमलाई पटक–पटक च्याम्पियन्स लिगको माथिल्लो चरणसम्म लगेका छन् । सन् २०१४ यता एथ्लेटिकोले दुईपटक त फाइनल नै खेलेको छ ।
तर, सिमोनीको सबालमा एक यस्तो तथ्य छ, जुन निकै रोचक छ । सिमोनीको नेतृत्वमा एथ्लेटिको जतिपटक समूह चरणबाट नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ, ऊ कुनै पनि टिमसँग हारेको छैन– शिवाय पोर्चुगिज फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोको टिम । हो, सिमोनीको कमान्डमा एथ्लेटिको जतिपटक च्यापियन्स लिगको नकआउटमा पुगेको छ, ऊ हरेकपटक रोनाल्डोकै टिमसँग मात्रै हारेको छ । नत्र सिमोनीको टिमलाई अन्य कुनै पनि क्लबले नकआउटमा आजसम्म हराउन सकेका छैनन् ।
विगतमा रोनाल्डो रियल मड्रिडमा छँदा र उनी इटालियन युभेन्टस गइकन पनि सिमोनी च्याम्पियन्स लिगमा रोनाल्डोकै टिमसँग हारेका छन् । ८ वर्षको बीचमा च्याम्पियन्स लिगको नकआउटमा पटक–पटक एकै खेलाडीको टिमसँग मात्रै हार्ने सिमोनी एक मात्रै दुर्लभ प्रशिक्षक हुन् ।
यसको अर्थ के यसपटक पनि सिमोनीको हकमा यही लागू हुन्छ ? अर्थात्, उनी लिभरपुललाई अन्तिम १६ बाटै आउट गराएर अन्तिम आठमा पुग्न सक्छन् ? धेरैको चासो यसमा छ ।
विगतका तथ्यांक बुँदागत रूपमा हेरौं–
– सन् २०१४ मा एथ्लेटिको च्याम्पियन्स लिगको फाइनल पुगेको थियो । तर, रियल मड्रिडसँग ९० मिनेटपछि थपिएको समयमा ४–१ ले पराजित उसको उपाधि सपना तुहिएको थियो । सो खेलमा रोनाल्डोले पनि पेनाल्टीमार्फत् १ गोल गरेका थिए ।
– त्यसपछि सन् २०१५ मा एथ्लेटिको च्याम्पियन्स लिगको नकआउटमा रोनाल्डोकै टिम रियलसँग पराजित भयो । क्वार्टरफाइनलमा एथ्लेटिको रियलसँगै १–० ले हारेर आउट भएको थियो ।
– २०१६ मा फेरि रियल मड्रिड र एथ्लेटिको मड्रिडको भेट च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमै भयो । एथ्लेटिको बार्सिलोनालाई हराउँदै फाइनलसम्म पुगेको थियो । तर, यसपटक एथ्लेटिको रियलसँग पेनाल्टी सुटआउटमा ५–३ ले पराजित भयो ।
– २०१७ मा पनि रियल र एथ्लेटिकोको भेट भयो । जहाँ सेमिफाइनलमा रियलले एथ्लेटिकोलाई ४–२ ले हराउँदै प्रतियोगिताबाट बाहिर गरायो । सो खेलमा रोनाल्डोले ह्याट्रिक नै गरेका थिए ।
– २०१८ मा रोनाल्डो फेरि युभेन्टसको जर्सीमा सिमोनी र एथ्लेटिकोका लागि भिलेन बने । एथ्लेटिकोले अन्तिम १६ को पहिलो लेगमा युभेन्टसलाई २–० ले हराए पनि युभेन्टसको घरमा एथ्लेटिको ३–० ले पराजित भयो, जहाँ रोनाल्डोले नै सनसनीपूर्ण ह्याट्रिक हानेका थिए ।
यी तथ्यले यो भन्छ कि, जब सिमोनी र उनको टिम च्याम्पियन्स लिगको नकआउट चरणमा प्रवेश गर्छन्, यदि उनी त्यहाँ हार्छन् भने रोनाल्डोको टिमसँग मात्रै हार्छन्, अरूसँग हादैनन् । तीन वर्षका बीचमा दुई फाइनल खेल्दा पनि सिमोनीको हकमा यो साबित भएको छ । नकआउटमा सबैलाई हराउँदै फाइनल पुगे पनि जब रोनाल्डोको टिमसँग भेट हुन्छ, सिमोनी हार टार्न सक्दैनन् ।
तर, यसपटक सिमोनीको नकआउट चरणमा रोनाल्डो र उनको टिम प्रतिस्पर्धी छैन, छ त साबिक विजेता लिभरपुल, जो यो सिजन युरोपमा घरेलु लिगको एक मात्रै अपराजित टिम हो । लिभरपुलसँग प्रिमियर लिगमा २५ अंकको अग्रता छ । के सिमोनीले यस्तो टिमलाई अन्तिम १६ बाटै आउट गराएर फेरि एकपटक आफूलाई साबित गर्लान् ? यसका लागि अर्को महिनामा हुने दोस्रो लेगसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित मिति ७ फाल्गुन २०७६, बुधबार १७:५८